အုပ်စုအဆင့်ကထွက်ခဲ့ရတဲ့ လက်ရှိချန်ပီယံ ဂျာမနီ ဘာတွေ မှားခဲ့လဲ
28 Jun 2018 . 6:32 PM
လက်ရှိချန်ပီယံ ဂျာမနီအသင်းကတော့ သူ့ရင် နောင်တော်ကြီးတွေဖြစ်တဲ့ ပြင်သစ်၊ အီတလီ၊ စပိန်တို့ရဲ့ လမ်းစဉ်အတိုင်း ကမ္ဘာ့ဖလားအုပ်စုအဆင့်ကနေ လှည့်ပြန်ခဲ့ရပြီ။ ၂၀၁၄ ကမ္ဘာ့ဖလားချန်ပီယံအသင်းက ကစားသမား(၈)ဦးအထိ ပါဝင်ခဲ့ပြီး တောင့်တင်းတဲ့လူစာရင်းနဲ့ အခုကမ္ဘာ့ဖလားကို ဆင်နွှဲခဲ့ပေမယ့် နှစ်ပွဲရှုံး၊ တစ်ပွဲနိုင် ရလဒ်နဲ့ အုပ်စုနောက်ဆုံးအဖြစ် ၂၀၁၈ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲကို အရှက်တကွဲ နှုတ်ဆက်ခဲ့ရတယ်။
ထူးခြားတာက ၂၀၁၄ တုန်းက အုပ်စုတတိယနေရာနဲ့ လှည့်ပြန်ခဲ့ရတဲ့ စပိန်တစ်သင်းကလွဲပြီး လက်ရှိချန်ပီယံအသင်းတွေဖြစ်တဲ့ ပြင်သစ်၊ အီတလီ၊ အခု ဂျာမနီတို့ဟာ အုပ်စုနောက်ဆုံးနေရာနဲ့ ထွက်ခဲ့ရတာပါပဲ။ ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲသမိုင်းတစ်လျှောက် တောင်ကိုရီးယားအသင်းကို ပထမဆုံးအကြိမ် ရှုံးနိမ့်ခဲ့တဲ့မှတ်တမ်းဆိုးကို ပိုင်ဆိုင်ခဲ့တဲ့ ဂျာမနီအသင်း ဘာတွေမှားခဲ့လဲ၊ ဘယ်လိုအားနည်းချက်တွေရှိခဲ့လဲဆိုတာ ပရိသတ်တွေ သိရှိနိုင်အောင် ဖော်ပြလိုက်ပါတယ် . . .
အသင်းတစ်သင်း ကမ္ဘာ့ဖလားချန်ပီယံဆု ဆွတ်ခူးခဲ့ပြီဆိုရင် အဲဒီအသင်းရဲ့အထိုင်ကို အပြောင်းအလဲလုပ်ဖို့ တွေဝေနေတတ်ကြတယ်။ အဲဒီအသင်းရဲ့ နည်းပြအပါအ၀င် ကစားသမားတွေကို အပြောင်းအလဲလုပ်လေ့မရှိကြဘူး။ ၂၀၀၆ မှာ အီတလီ ဗိုလ်စွဲခဲ့ပြီး ၂၀၁၀ ကမ္ဘာ့ဖလားဆင်နွှဲခဲ့ချိန်တုန်းကလည်း နည်းပြလစ်ပီ Lippi နဲ့ ၂၀၀၆ ကမ္ဘာ့ဖလား ချန်ပီယံအသင်းက ကစားသမားအတော်များများနဲ့ ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့တယ်။ ရလဒ်ကတော့ အီတလီအသင်း နိုင်ပွဲမရဘဲ၊ နှစ်ပွဲသရေ၊ တစ်ပွဲရှုံး နှစ်မှတ်နဲ့ အုပ်စုက ထွက်ခဲ့ရတာပါပဲ။ ၂၀၁၄ ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲမှာ စပိန်အသင်း ခံရတာကလည်း ဒီအတိုင်းပဲ။ အဲဒီအသင်းတွေလိုပဲ အခု ဂျာမနီက ထပ်မှားခဲ့ပြန်ပါပြီ။
လွန်ခဲ့တဲ့(၄)နှစ်တုန်းက ခြေစွမ်းမျိုး မရှိတော့တဲ့ကစားသမားတွေကို ဂျာမနီနည်းပြဂျိုအာချင်လိုး Joachim Low က အလွန်အကျွံ အားကိုးခဲ့တယ်။ ဥပမာပြောရရင် ပြီးခဲ့တဲ့ကမ္ဘာ့ဖလား(၂)ကြိမ်မှာ (၅)ဂိုးစီ သွင်းခဲ့တဲ့ တိုက်စစ်ကစားသမား မူလာ Muller ဟာ အခုကမ္ဘာ့ဖလားမှာ တစ်ဂိုးမှ မသွင်းနိုင်သလို ဂိုးပေါက်ကန်သွင်းခဲ့တဲ့အကြိမ်က လက်ချိုးရေရလောက်တဲ့အထိဖြစ်ခဲ့ပြီး တောင်ကိုရီးယားနဲ့ အုပ်စုနောက်ဆုံးပွဲမှာ ပွဲထွက်စာရင်းက ချန်လှပ်ခံခဲ့ရတဲ့အထိ ဆိုးရွားခဲ့တယ်။
Midfield Masters တွေဖြစ်တဲ့ ကရူးစ် Kroos ၊ အိုဇေးလ် Ozil တို့ဆိုရင်လည်း သူတို့ နာမည်နဲ့မလိုက်တဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်မျိုးကို ပြသခဲ့တယ်။ အဆိုးရွားဆုံးက ခီဒီရာ Khedira ပါ။ ဒီ အသက်(၃၁)နှစ်အရွယ် ဂျူဗင်တပ်စ်ဝါရင့်ကွင်းလယ်လူဟာ တစ်ချိန်တုန်းကလို Defensive Midfield မှာ အကောင်းဆုံးစွမ်းဆောင်ရည်မျိုး မရှိတော့ပါဘူး။
ဂျိုအာချင်လိုးဟာ အသင်းရဲ့လူစာရင်းကို အပြောင်းအလဲတော့ လုပ်ခဲ့ပေမယ့် အဲဒါတွေက အလုပ်မဖြစ်ခဲ့ဘူး။ ဂျိုအာချင်လိုး ရွေးချယ်ခဲ့တဲ့ လူငယ်ကစားသမားတွေနဲ့ စီနီယာကစားသမားတွေအကြား နားလည်မှု ရှိရှိ တွဲဖက်ကစားနိုင်မှု အားနည်းခဲ့တာက ဂျာမနီအသင်းကို ကျရှုံးစေခဲ့တာပါပဲ။
နောက်တစ်ချက်က ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီတုန်းက မန်စီးတီးအသင်းနဲ့အတူ ခြေစွမ်းပြကစားပြီး အကောင်းဆုံးဆုတွေရခဲ့တဲ့ ဆာနေး Sane ကို ချန်လှပ်ပြီး လေဗာကူဆင်အသင်းရဲ့ လူငယ်တိုက်စစ်ကစားသမား ဂျူလီယိုဘရန့်တ် Julian Brandt ကို ဦးစားပေးရွေးချယ်ခဲ့တယ်။ ဒါပေမဲ့ ဘရန့်တ်ဟာ အုပ်စုပွဲစဉ်(၃)ပွဲမှာ စုစုပေါင်း(၁၉)မိနစ်သာ ကစားခွင့်ရခဲ့တာကြောင့် သူ့ကိုရွေးချယ်ခဲ့တဲ့ ဂျိုအာချင်လိုးရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်က မေးခွန်းထုတ်စရာဖြစ်ခဲ့တယ်။ နောက်ပြီးလိုက်ပ်ဇစ်အသင်းရဲ့ လူငယ်တိုက်စစ်မှူး တီမိုဝါနာ Timo Werner ကို ဂျိုအာချင်လိုးက မျှော်လင့်ချက်ကြီးကြီးနဲ့ ရုရှားမြေကို ခေါ်ယူခဲ့ပေမယ့် သူ့ရဲ့အကောင်းဆုံးပုံစံကို အသုံးမချနိုင်ခဲ့ဘူး။
နှစ်ပေါင်း(၄၀)အကြာမှာ ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ် ဂျာမနီအသင်း ကမ္ဘာ့ဖလားအုပ်စုအဆင့်က လှည့်ပြန်ခဲ့ရပါပြီ။ အခုအချိန်မှာ အဆိုးအကောင်းတွေထက် အနာဂတ်အတွက် ဘယ်လိုပြင်ဆင်ရမလဲဆိုတာကို စဉ်းစားရတော့မှာပါ။ အခု ဂျာမနီအသင်းက ကစားသမား(၁၅)ယောက်ဟာ လာမယ့် ၂၀၂၂ ကမ္ဘာ့ဖလားဆိုရင် အသက်(၃၀)အရွယ်အထိရှိနေပါပြီ။ ဂျာမနီဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်အနေနဲ့ ဂျိုအာချင်လိုးကို ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲမတိုင်ခင်ကတည်းက စာချုပ်သက်တမ်းတိုးဖို့ သဘောတူညီမှုရခဲ့ပေမယ့် လက်ရှိအနေအထားအရ မသေချာနိုင်တော့ပါဘူး။ ဂျာမနီဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်အနေနဲ့ အခုကျရှုံးမှုတွေကို မေ့ပစ်ပြီး အနာဂတ်အတွက် ပြင်ဆင်မှုတွေကို စတင်ပြုလုပ်ရတော့မှာဖြစ်ပါတယ် . . .
အုပျစုအဆငျ့ကထှကျခဲ့ရတဲ့ လကျရှိခနျြပီယံ ဂြာမနီ ဘာတှေ မှားခဲ့လဲ
လကျရှိခနျြပီယံ ဂြာမနီအသငျးကတော့ သူ့ရငျ နောငျတျောကွီးတှဖွေဈတဲ့ ပွငျသဈ၊ အီတလီ၊ စပိနျတို့ရဲ့ လမျးစဉျအတိုငျး ကမ်ဘာ့ဖလားအုပျစုအဆငျ့ကနေ လှညျ့ပွနျခဲ့ရပွီ။ ၂၀၁၄ ကမ်ဘာ့ဖလားခနျြပီယံအသငျးက ကစားသမား(၈)ဦးအထိ ပါဝငျခဲ့ပွီး တောငျ့တငျးတဲ့လူစာရငျးနဲ့ အခုကမ်ဘာ့ဖလားကို ဆငျနှဲခဲ့ပမေယျ့ နှဈပှဲရှုံး၊ တဈပှဲနိုငျ ရလဒျနဲ့ အုပျစုနောကျဆုံးအဖွဈ ၂၀၁၈ကမ်ဘာ့ဖလားပွိုငျပှဲကို အရှကျတကှဲ နှုတျဆကျခဲ့ရတယျ။
ထူးခွားတာက ၂၀၁၄ တုနျးက အုပျစုတတိယနရောနဲ့ လှညျ့ပွနျခဲ့ရတဲ့ စပိနျတဈသငျးကလှဲပွီး လကျရှိခနျြပီယံအသငျးတှဖွေဈတဲ့ ပွငျသဈ၊ အီတလီ၊ အခု ဂြာမနီတို့ဟာ အုပျစုနောကျဆုံးနရောနဲ့ ထှကျခဲ့ရတာပါပဲ။ ကမ်ဘာ့ဖလားပွိုငျပှဲသမိုငျးတဈလြှောကျ တောငျကိုရီးယားအသငျးကို ပထမဆုံးအကွိမျ ရှုံးနိမျ့ခဲ့တဲ့မှတျတမျးဆိုးကို ပိုငျဆိုငျခဲ့တဲ့ ဂြာမနီအသငျး ဘာတှမှေားခဲ့လဲ၊ ဘယျလိုအားနညျးခကျြတှရှေိခဲ့လဲဆိုတာ ပရိသတျတှေ သိရှိနိုငျအောငျ ဖျောပွလိုကျပါတယျ . . .
အသငျးတဈသငျး ကမ်ဘာ့ဖလားခနျြပီယံဆု ဆှတျခူးခဲ့ပွီဆိုရငျ အဲဒီအသငျးရဲ့အထိုငျကို အပွောငျးအလဲလုပျဖို့ တှဝေနေတေတျကွတယျ။ အဲဒီအသငျးရဲ့ နညျးပွအပါအဝငျ ကစားသမားတှကေို အပွောငျးအလဲလုပျလမေ့ရှိကွဘူး။ ၂၀၀၆ မှာ အီတလီ ဗိုလျစှဲခဲ့ပွီး ၂၀၁၀ ကမ်ဘာ့ဖလားဆငျနှဲခဲ့ခြိနျတုနျးကလညျး နညျးပွလဈပီ Lippi နဲ့ ၂၀၀၆ ကမ်ဘာ့ဖလား ခနျြပီယံအသငျးက ကစားသမားအတျောမြားမြားနဲ့ ယှဉျပွိုငျခဲ့တယျ။ ရလဒျကတော့ အီတလီအသငျး နိုငျပှဲမရဘဲ၊ နှဈပှဲသရေ၊ တဈပှဲရှုံး နှဈမှတျနဲ့ အုပျစုက ထှကျခဲ့ရတာပါပဲ။ ၂၀၁၄ ကမ်ဘာ့ဖလားပွိုငျပှဲမှာ စပိနျအသငျး ခံရတာကလညျး ဒီအတိုငျးပဲ။ အဲဒီအသငျးတှလေိုပဲ အခု ဂြာမနီက ထပျမှားခဲ့ပွနျပါပွီ။
လှနျခဲ့တဲ့(၄)နှဈတုနျးက ခွစှေမျးမြိုး မရှိတော့တဲ့ကစားသမားတှကေို ဂြာမနီနညျးပွဂြိုအာခငျြလိုး Joachim Low က အလှနျအကြှံ အားကိုးခဲ့တယျ။ ဥပမာပွောရရငျ ပွီးခဲ့တဲ့ကမ်ဘာ့ဖလား(၂)ကွိမျမှာ (၅)ဂိုးစီ သှငျးခဲ့တဲ့ တိုကျစဈကစားသမား မူလာ Muller ဟာ အခုကမ်ဘာ့ဖလားမှာ တဈဂိုးမှ မသှငျးနိုငျသလို ဂိုးပေါကျကနျသှငျးခဲ့တဲ့အကွိမျက လကျခြိုးရရေလောကျတဲ့အထိဖွဈခဲ့ပွီး တောငျကိုရီးယားနဲ့ အုပျစုနောကျဆုံးပှဲမှာ ပှဲထှကျစာရငျးက ခနျြလှပျခံခဲ့ရတဲ့အထိ ဆိုးရှားခဲ့တယျ။
Midfield Masters တှဖွေဈတဲ့ ကရူးဈ Kroos ၊ အိုဇေးလျ Ozil တို့ဆိုရငျလညျး သူတို့ နာမညျနဲ့မလိုကျတဲ့ စှမျးဆောငျရညျမြိုးကို ပွသခဲ့တယျ။ အဆိုးရှားဆုံးက ခီဒီရာ Khedira ပါ။ ဒီ အသကျ(၃၁)နှဈအရှယျ ဂြူဗငျတပျဈဝါရငျ့ကှငျးလယျလူဟာ တဈခြိနျတုနျးကလို Defensive Midfield မှာ အကောငျးဆုံးစှမျးဆောငျရညျမြိုး မရှိတော့ပါဘူး။
ဂြိုအာခငျြလိုးဟာ အသငျးရဲ့လူစာရငျးကို အပွောငျးအလဲတော့ လုပျခဲ့ပမေယျ့ အဲဒါတှကေ အလုပျမဖွဈခဲ့ဘူး။ ဂြိုအာခငျြလိုး ရှေးခယျြခဲ့တဲ့ လူငယျကစားသမားတှနေဲ့ စီနီယာကစားသမားတှအေကွား နားလညျမှု ရှိရှိ တှဲဖကျကစားနိုငျမှု အားနညျးခဲ့တာက ဂြာမနီအသငျးကို ကရြှုံးစခေဲ့တာပါပဲ။
နောကျတဈခကျြက ပွီးခဲ့တဲ့ရာသီတုနျးက မနျစီးတီးအသငျးနဲ့အတူ ခွစှေမျးပွကစားပွီး အကောငျးဆုံးဆုတှရေခဲ့တဲ့ ဆာနေး Sane ကို ခနျြလှပျပွီး လဗောကူဆငျအသငျးရဲ့ လူငယျတိုကျစဈကစားသမား ဂြူလီယိုဘရနျ့တျ Julian Brandt ကို ဦးစားပေးရှေးခယျြခဲ့တယျ။ ဒါပမေဲ့ ဘရနျ့တျဟာ အုပျစုပှဲစဉျ(၃)ပှဲမှာ စုစုပေါငျး(၁၉)မိနဈသာ ကစားခှငျ့ရခဲ့တာကွောငျ့ သူ့ကိုရှေးခယျြခဲ့တဲ့ ဂြိုအာခငျြလိုးရဲ့ဆုံးဖွတျခကျြက မေးခှနျးထုတျစရာဖွဈခဲ့တယျ။ နောကျပွီးလိုကျပျဇဈအသငျးရဲ့ လူငယျတိုကျစဈမှူး တီမိုဝါနာ Timo Werner ကို ဂြိုအာခငျြလိုးက မြှျောလငျ့ခကျြကွီးကွီးနဲ့ ရုရှားမွကေို ချေါယူခဲ့ပမေယျ့ သူ့ရဲ့အကောငျးဆုံးပုံစံကို အသုံးမခနြိုငျခဲ့ဘူး။
နှဈပေါငျး(၄၀)အကွာမှာ ပထမဆုံးအကွိမျအဖွဈ ဂြာမနီအသငျး ကမ်ဘာ့ဖလားအုပျစုအဆငျ့က လှညျ့ပွနျခဲ့ရပါပွီ။ အခုအခြိနျမှာ အဆိုးအကောငျးတှထေကျ အနာဂတျအတှကျ ဘယျလိုပွငျဆငျရမလဲဆိုတာကို စဉျးစားရတော့မှာပါ။ အခု ဂြာမနီအသငျးက ကစားသမား(၁၅)ယောကျဟာ လာမယျ့ ၂၀၂၂ ကမ်ဘာ့ဖလားဆိုရငျ အသကျ(၃၀)အရှယျအထိရှိနပေါပွီ။ ဂြာမနီဘောလုံးအဖှဲ့ခြုပျအနနေဲ့ ဂြိုအာခငျြလိုးကို ကမ်ဘာ့ဖလားပွိုငျပှဲမတိုငျခငျကတညျးက စာခြုပျသကျတမျးတိုးဖို့ သဘောတူညီမှုရခဲ့ပမေယျ့ လကျရှိအနအေထားအရ မသခြောနိုငျတော့ပါဘူး။ ဂြာမနီဘောလုံးအဖှဲ့ခြုပျအနနေဲ့ အခုကရြှုံးမှုတှကေို မပေ့ဈပွီး အနာဂတျအတှကျ ပွငျဆငျမှုတှကေို စတငျပွုလုပျရတော့မှာဖွဈပါတယျ . . .